विश्वमै कहीँ नदेखिएको अनशन यहाँ देखियो : डा. सुन्दरमणि दीक्षित – Nepali Digital Newspaper
विश्वमै कहीँ नदेखिएको अनशन यहाँ देखियो : डा. सुन्दरमणि दीक्षित
घटना र विचार, न्युज डेस्क !3years ago January 11, 2018
नागरिक समाजका अगुवा एवम् ख्यातिप्राप्त चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितले अनशन, घेराउ या धर्ना दिएर समस्याको समाधान खोज्ने तरिका प्रजातन्त्रसम्मत नभएको बताउनुभएको छ । डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै अनशन शुरु गरेपछि डा. सुन्दरमणि दीक्षितले घटना र विचारसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘विश्वमा कहीँ नभएको अनशन हामी यहाँ देख्दैछौँ ।’
हेर्नुहोस् डा. डीक्षितको विस्तृत विचार भिडियोमा-